Tsy misy fotoana ho lanina
"Lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika" — Jer. 8:20.
Ho avy ny Tompo. Hifarana tsy ho ela ny tantaran'ny tany. Vonona ny hihaona amin'ny Mpitsaran'ny tany ve ianao?, Tadidio "Fa fitsarana tsy misy famindrampo no ho anjaran'izay tsy mamindra fo" - Jak. 2:13. Mampivarahontsana tokoa ny hahita amin'ny andro lehibe farany ireo efa mifankahazatra amintsika ka hisaraka amintsika mandrakizay, ny hahita ny fianakaviantsika, mety ireo zanatsika mihitsy aza, ho very, ny hahita ireo izay nitsidika ny tokatranontsika sy niray latabatra tamintsika ho isan'ireo very. Koa hanontany tena isika hoe: noho ny tsy fahari-poko ve no nahatonga izany? Sa ny toetrako tsy maneho an'i Kristy? Sa tsy voafehy ny izaho? Sa lasa maharikoriko azy ireo ny fivavahana kristianina?
Tsy maintsy hampitandremana ny amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela izao tontolo izao. Fohy ny fotoana hiasantsika. Taona maro no hiainana any amin'ny mandrakizay, ka tokony hararaotina amin'ny alalan'ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha, ary amin'ny alalan'ny fanapariahana ny fahazavana amin'ny hafa. Miantso ny olony izay manana ny fahazavana lehibe Andriamanitra, miantsoroka asa maro sy miorina amin'ny fahamarinana, mba hiasa ho azy ireo sy ho an'ny hafa ankehitriny mihoatra noho ny tamin'ny lasa. Aoka hampiasaina ny fahaiza-manao rehetra; aoka hampiasaina ny hery rehetra sy ny talenta nomena; ampiasao ny fahazavana rehetra izay nomen'Andriamanitra anao hanasoavana ny hafa. Aoka tsy ho mpitory teny fa aoka ho mpanompon'Andriamanitra.
Rehefa azon'ireo mpanompo tsara ny fahamarinana, dia ho tahaka ny fahazavana mahery vaika kokoa izany; rehefa mangetaheta ny hanazava ny hafa ianao ary mametraka saina eo ambany fiasa masin'ny Fanahin'Andriamanitra, dia ho voasarika amin'ireo zavatra izay misy fiantraikany ho an'ny mandrakizay ny fijerinao. Amin'izany ezaka ombam-bavaka hahazo fahazavan'ny lanitra izany, dia hiara-mitepo amin'ny hery miasa mangina sy manetsika avy amin'ny fahasoavana ny fonao; horavahan'ny hafanam-po masina mandrakariva ny fitiavanao, ary ny fiainanao rehetra amin'ny maha-Kristianina dia ho marina, ho mahitsy sy ho votom-bavaka kokoa. Noho izany dia lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao satria mitoetra ao am-ponao i Kristy. - HM, 1 Feb. 1898.